नेपाल आज | विषादी परीक्षण रोकमा सत्तारूढ सांसदको प्रश्न : सरकार भारतसामु झुकेकै हो ?
आइतबार, ०३ कार्तिक २०७६
विषादी परीक्षण रोकमा सत्तारूढ सांसदको प्रश्न : सरकार भारतसामु झुकेकै हो ?
आइतबार, २२ असार २०७६ गते प्रकाशित - नेपालआज समाचारदाता
काठमाडौं : भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण रोकेर सरकार भारतीय सरकारसामु झुकेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन् । पार्टी संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा उनीहरूले ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएको सरकारबाटै यस्तो निर्णय आउनु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भने सांसदहरूको आलोचनाप्रति आक्रोशित बनेका थिए । उनले फौजी सिपाहीले जस्तै सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिए । एक सांसदका अनुसार सत्तारूढ दलकै नेता तथा सांसदहरूले सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर संसद्, संसदीय समिति र सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना गरेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश पोखेका थिए ।
बैठकमा उनले दल र पार्टीको बैठकबाहेक अन्य फोरमबाट सरकारको आलोचना नगर्न सांसदहरूलाई सचेतसमेत गराएका छन् । उनले संसद्मा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने काम सत्तापक्षका सांसदहरूको भएको उल्लेख गर्दै सरकारको विरोध गर्नु संसदीय मान्यता र मर्यादाविपरीत हुनेसमेत बताएका थिए । ‘संसद् र बाहिर सरकारमाथि गरिएको आलोचनाको हिसाबकिताब लिइन्छ भन्ने शैलीमा उहाँले जवाफ दिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो ।
वरिष्ठ नेता माधव नेपालप्रति लक्षित गर्दै ओलीले पार्टीभित्र कटुतापूर्ण सम्बन्ध हुन आवश्यक नरहेको बताए । ‘हामी सबै एउटै डुंगामा सवार छौं, यो कुरा सबैले मनन गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए । संसद् मातहतका संसदीय समितिहरूले सरकारलाई असहयोग पुग्ने गरी निर्णय गर्न थालेकामा पनि ओलीको असन्तुष्टि थियो । ओलीअघि बोलेका २२ सांसदमध्ये अधिकांशले सरकारको आलोचना गरेका थिए । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति र सरकारको कामकारबाहीले पार्टीको साख गिरेको धेरैको भनाइ थियो । कतिपयले सरकारको खुलेरै प्रतिरक्षा गरे । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो।
नेकपा विषादी परीक्षण
नेकपामा यी २ नेता तथा नेतृ मध्ये एकलाई सभामुख बनाउने ब्यापक चर्चा
विदेशीले स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्न सक्छन्, चनाखो बनौँ : नेपाल
शनिबार, ०२ कार्तिक २०७६
रेड जाेनमा नपरेका मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरकाे विषयमा खुलाए यस्ताे खुलासा
१९ वर्षीया किशोरीको दुईवटा योनी(फाेटाेसहित)
यसरी यौन सम्पर्क गर्नुहोस गर्भ रहँदैन
प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल रातभरि यस्ताे काम गर्छिन!
बुधबार, २९ असोज २०७६
विद्युतीय बस खरीद प्रक्रियामा ढिलाइ किन ?
शिक्षण अस्पतालमा तोडफोड, स्थिती नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास प्रहार
अन्ततः रोशनी शाहीले फेरि दर्ता गराइन् निवदेन, न्यायाधीशले दिए यस्तो आदेश
'मैले सोनिकालाई असल मित्रको नाताले चुप्पा गरेकाे हुँ'
पुरानो मूल्यमा नयाँ र सुरक्षित गाडी (भिडियोसहित)